किन आउँछ डन्डिफोर ? यस्ता छन् जोगिने उपाय | Khabar Express Tv
किन आउँछ डन्डिफोर ? यस्ता छन् जोगिने उपाय
खबर एक्सप्रेस २०७६-०२-१२ ११:०० मा प्रकाशित Total Shares: 452
काठमाडौं - छालामा हुने एक प्रकारको तैलिय ग्रन्थीका कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउने गर्छ ।सामान्यतया छालालाईकोमल राख्नका लागि उक्त ग्रन्थीले चिल्लो पदार्थ पैदा गर्ने गर्छ । युवावस्थामा हर्मोनको गडबडीका कारण उक्त ग्रन्थीमा असन्तुलन आई डन्डिफोरले सताउने गर्छ।महिनावारी अनियमित हुने महिलालाई पनि डन्डिफोरले सताउने गर्छ । त्यसैगरी अव्यवस्थित जीवनशैली, असन्तुलित खानपान, तनाव, अनिद्रा आदि कारणले पनि हर्मोनमा असन्तुलन हुन्छ । जसको फलस्वरुप डन्डिफोर आउने गर्छ ।
सफा पानीले दिनमा दुईपटक अनुहार सफा गर्न सकिन्छ । ग्रन्थीमा तैलिय पदार्थ बाहिर निस्कनबाट जोगाउन समयसमयमा सफा गर्नु राम्रो हुन्छ । स्वस्थ खानपानमा जोड दिनुपर्छ। सकेसम्म चिल्लो खानेकुराबाट टाढै बस्नुपर्छ । फलफूल तथा हरिया सागसब्जी र पानी प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ ।
सुरुसुरुमा डन्डिफोर आउदा उपचार गरिहाल्नु हुँदैन । तर, हेलचेक्र्याइँका कारण अन्य ठाउँमा संक्रमण हुने भएकाले सावधान हुन जरुरी छ । कतिपय डन्डिफोर आफैँ निको भएर जान्छ । त्यसैले डन्डिफोर कहिल्यै पनि निचोर्नु र फुटाउनु हुँदैन ।फुटाउँदा डन्डिफोरको पानी सर्न गई अर्को ठाउँमा पनि आउने सम्भावना हुन्छ ।